Nzira yekushandisa sei kukura kwekushanya mukudyara? | Ehupfumi Zvemari
Nzira yekushandisa sei kukura kwekushanya mukudyara?
Jose recio | | Bolsa, Zvigadzirwa zvemari
Chikamu cheSpanish chekushanya ndicho chechitatu chine simba kwazvo pasirese, kuseri kweUnited States neFrance chete. Ichi ichokwadi kuti iwe unogona kutora mukana kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire kuburikidza nemusika wemasheya kukosha kweaya maitiro. Nekudaro, uye kunyangwe hazvo kukosha kweiyo indasitiri yevashanyi munyika, makambani mana chete akanyorwa pabenchmark index yeSpanish equities, iyo Ibex 35: Amadeus, AENA, IAG uye Sol Meliá. Kunyangwe zvirinani kusangana nezvinodikanwa zveava vane mari vanokosha vanoda kuisa mari mune yekushanya chikamu kupfuura zvese.
Tourism ndiyo indasitiri inotungamira muhupfumi hweSpain, asi panguva imwechete chikamu chakaparadzwa zvakanyanya pamusika wemasheya nemakambani mashoma anomiririrwa mumusika unoramba uripo. Iwo maTourist Movements on Border (FRONTUR) mukati megore rapfuura anotsigira chinzvimbo chakakosheswa chekushanya kweSpanish nekuratidza kuti huwandu hwevashanyi vanosvika mamirioni makumi masere nemasere neshanu vakashanyira nyika yedu panguva iyi.
Iyi data inomiririra a 8,6% kuwedzera zvine chekuita nekuyerera kwevashanyi kwegore rapfuura. Kusvikira pakuve simba rechitatu renyika rekushanya, kuseri kweUnited States neFrance chete, iine data rakagadziriswa kubva kuWorld Tourism Organisation (UNWTO). Uye zvese izvi kunyangwe zvichiratidza kudzikira kwekushanya kunoyerera kubva kunze kwemiganhu yedu, sezviri kuitika mumwedzi yezhizha: Chikunguru uye zhizha. Iko kwave nekudonha mukushanyirwa kweanenge 2% zvichienzaniswa negore rapfuura.
1 Tourism chikamu chakatsiga
2 Akanyorwa makambani muchikamu
3 Vamiririri vendege
4 Kurwiswa kwemagandanga muBarcelona
5 Mipiro yezvakakosha zvevashanyi
6 Mashandiro nemaitiro aya?
Tourism chikamu chakatsiga
Iyi pfupi-data data ndechimwe chikonzero chevatengesi kuti vafarire mune ino yakakosha chikamu chehunyanzvi. Nekudaro, uye kunyangwe ichikosha pa nhoroondo dzeveruzhinji, haina chikamu chakatarwa mukati memari dzeSpanish. Sezvakaita nekuvaka, mabasa emari kana tekinoroji uye kutaurirana. Asi pane izvo zvinopesana, inosanganisirwa mumasevhisi evatengi, pamwe nevezvenhau nemaketani ekugovera chikafu. Ichi ndicho chimwe chezvipingamupinyi zvikuru pakunyatsojekesa makambani ezvekushanya ayo anogona kuita portfolio yevatengesi.
Ichi chikamu chine zviitiko zvebhizinesi zvakanyanyisa uye zvinokanganisa pekugara muhotera, kutakura nendege, nzvimbo dzekuzorora uye dzekuchengetedza. Mumwe nemumwe wavo anongova nevamiriri vashoma ekugutsa chinodikanwa muhuwandu hwekudyara. Uye hapana chero chirevo chakakosha kunze kwenyika kuti chienzanise nemamwe makambani ari muchikamu. Asi kunyangwe zvakadaro vanopa akateedzana hunhu hwakajairika kune vese. Tsika yakabatana neyekushanya kuyerera, pamwe nezvivakwa zvavanopa kune vafambi uye zvine chekuita neSpain, nechipo che "Zuva nemahombekombe" inova ndiyo chinhu chayo chakakosha kwazvo maererano nevakwikwidzi vayo vakuru.
Akanyorwa makambani muchikamu
Parizvino, chete gumi nemaviri emakambani angangoita zana nemakumi matatu akabatanidzwa mumusika unoenderera wakatsaurirwa chiitiko ichi. Ndiine vamiriri vana chete paIbex 130 (Amadeus, AENA, IAG uye Sol Meliá). Kusiyana nemakore apfuura, mitengo yavo kusvika pari zvino gore iri yakaderera pane iya inogadzirwa neyekusarudzika indekisi yeSpanish stock market (-35%). Iko chete kukosha kumwe kubva kubazi rekushanya kunoratidza kuita kuri nani, kunyanya Amadeus iyo inoderera zvishoma kusvika pa0,35%. Inobatwa mune zvese zviitiko neyakaitika kudonha (5%) yeUnited States stock market.
Nemitsara yebhizinesi, kunyangwe mukati mechikamu chimwe chete chebhizinesi, sezvazviri nevamiriri vaviri chete veindasitiri yekugamuchira vaeni, iyo inomiririra niches dzakasiyana dzebhizinesi. Ipo keteni yeSol Meliá ichigadzika chipo chayo kunyanya pachikamu che "zuva nemahombekombe", NH Hotels yakavakirwa pakushanya kwemaguta uye kufamba bhizinesi.
Kune avo chikamu, ndege dzendege dzakanyorwa pane yeSpain inoenderera musika, IAG uye eDreams, ivo vanochengetedza iwo mamwe mabhizimusi emabhizimusi uye mune ese ari maviri mutengo wemasheya avo unoenderana padanho iro mutengo wemafuta unokura mumisika yemari. Zvimwe zvirevo zvinova ndizvo zvinoitwa nevashandisi 'maAmadeus kana maParques Reunidos, kunyangwe zvichibva munzira dzakasiyana kuenda kune dzakapfuura.
Icho chikamu mune zvese chakabatana zvakanyanya nekukura kwehupfumi. Iyo yakakura kukura kwekuwedzera mune zvehupfumi, zvirinani bhizinesi mhedzisiro iwe yaunowana kubva kumakambani akanyorwa. Zvekuti nenzira iyi inochinjiswa kumutengo wezvikamu. Kune rimwe divi, uye sechinhu chisina kunaka, zvinoratidzira kunetseka kwake kukuru kune magandanga izvo zvinoitika kumwe kunhu panyika. Hazvishamise kuti zvine zvazvinoita pakufamba kwevafambi.
Kurwiswa kwemagandanga muBarcelona
Kusvika padanho rekuti mushure mekurwiswa muBarcelona zhizha rapfuura, yaive tsika dzevashanyi izvo akatungamirira kurasikirwa pane ese European stock exchange. MuSpain, ine kudonha pamusoro peiyo inogadzirwa neIbex 35 (1%). IAG, nekudzikira kwe3%, uye NH Hoteles uye Sol Meliá, kutenderera 2,5%. Kusiya anosvika mazana emamirioni euros mumusika wemasheya mumaawa mashoma. Sechikamu chakanyanya kubatwa nezviito zvehugandanga uye pamusoro pehumwe hunhu hwekuenzana kwenyika. Iyi ndiyo imwe yenjodzi dzakakomba idzo dunhu rinotarisana naro sezvo richinyanya kutarisana nekudonha kuri kuiswa nesimba munzvimbo dzehunhu hwemhando idzi.
Hazvishamisi kuti kana chimwe chezviitiko zvakakomba chikaitika, chinhu chinonzwisisika icho varimi vadiki nepakati varimi vanogona kuita kuti vafambe (kunyangwe kwechinguva chidiki) kubva kune aya maitiro. Nekuti ivo kazhinji vanotambura kuderera mumitengo yako nenzira inoshamisa kwazvo. Nekuderera kweanopfuura 5% uye ayo anochengetwa nepo kusagadzikana kuchipera. Ichokwadi kuti ivo havangowirirana chete nehunhu hwesangano rekushanya, asi ndiyo inonyanya kunetseka kuirodza zvine chekuita nekusimba kwavo. Uye zvino, zvinosuwisa, isu takanyudzwa mune ino maitiro ehunhu, uko panguva ingangotarisirwa kurwiswa nezviratidzo zvekuzivikanwa kunogona kuitika.
Mipiro yezvakakosha zvevashanyi
Iri kirasi rezvifungo zvekudyara mari muzvikwereti zvinoratidzirwa zvakanyanya nekuti zvinovimba zvakanyanya kupfuura nakare kose mukushandisa. Mupfungwa iyi, ivo vakafanana chaizvo nema cyclical stock, ayo anozvibata zvirinani munguva dzakakura uye zvakanyanya mukuzorora. Ndokureva, iwe unofanirwa kuziva mashandiro navo kuti usatore kushamisika kushamisika panguva yekutengesa kosi. Kune rimwe divi, idzo kuchengetedzeka uko mabhizinesi ako akajairika, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti nekuchengeteka kwako kwese urikushandisa iwe kushandisa nguva yako yezororo kana kungonakidzwa nerwendo rwusina kujairika kana rwendo.
Iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve kubva zvino zvichienda kuti hunhu hwevashanyi hwakabatana zvikuru neSpain pane kune imwe nyika yepasi rese. Kunyangwe pasina kunyatso kuoneswa muhuwandu hwemakambani akanyorwa pamusika weSpanish stock. Kwete zvisina maturo, ivo vachiri vashoma kwazvo kana munhu akafunga huremu hunoshandiswa nenyika yedu mukati mezvekunze kwenyika chikamu chekushanya. Iko iko kunyange iine iyo inomiririra chikamu chikamu pamberi penyika. Mupfungwa iyi, kana inogona kukanganikwa kuti izvo zvinonzi zuva uye mahombekombe muSpain anotariswa semari yemari. Chinhu chisingaitike, semuenzaniso, muSlovenia, Poland kana Sweden kungodoma chete mienzaniso mishoma.
Mashandiro nemaitiro aya?
Chimwe chiitiko chekuongorora ndiko kushanda mukirasi ino yekuchengetedzeka. Zvakanaka, imwe yenguva dzakanakisa yekutora zvinzvimbo iri mumwedzi yezhizha. Chaizvoizvo nekuti iri kana iyo mushanyi inoyerera uye uko zviitiko zvemakambani ari muchikamu zvacho zviri zvikuru. Mukufunga, chokwadi ichi chinofanira kuitika nekukwira kwemitengo yemakotesheni. Kunyangwe hazvo zvisiri izvo zvisingagare zvakadaro, kure nazvo. Nekuti ivo zvakare vanovimba nezvimwe zvakakosha zvinhu uye izvo zvechokwadi zvinofanirwa kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi. Kunyanya kana makambani ezvekushanya ari mashoma kwazvo mune iripo kuripo inopihwa nemarudzi emari.
Kubva pane akajairika mamiriro, chimwe chinhu chinofanirwa kumiswa chiri chekureva kune chikamu chemubhadharo nemakambani aya. Vashoma kwazvo vane basa rekuigovera uye nekudzoka kushoma uko kusinga pfuure 4%. Pazasi peizvozvo zvinoratidzwa nemamwe masekete emari yenyika. Kubva pane ino maonero, zvikamu zvekushanya hazvibatsiri zvakanyanya uye zvakanyanya kubatsira kune vanoita mari. Kune rimwe divi, chimwe chezvakanakisa zvekutora chinzvimbo mumakambani aya kugadzikana uko kwekushanya kunomiririra muhupfumi hweSpain. Kunyangwe hazvo isina kucherechedzwa zvakanyanya mukukoshesa kwakakosha mumutengo wechengetedzo idzi. Mukufunga, chokwadi ichi chinofanira kuitika nekukwira kwemitengo yemakotesheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nzira yekushandisa sei kukura kwekushanya mukudyara?
Maitiro: izvo zvikuru zvinoshamisa paunodzoka kubva kuzororo
Zvese zvaunoda kuziva nezve chiyero chemvura